Daaweynta infekshanka dhegta - Tababbarka dhegaha ee daaweynta dhegta - اموزش یک
Daaweynta infekshanka dhegta – Tababbarka dhegaha ee daaweynta dhegta
Daaweynta infekshanka dhegaha waa mid ka mid ah cudurrada ugu badan uguna caansan ee carruurta caabuq ku dhaca dhegta. Sababta ugu badan ee carruurta loogu gudbiyo dhakhtar kayar laba sano waa infakshanka dhegta dhexe. Infekshanka muddada-dhexe waxaa loo yaqaanaa warbaahinta otitis. 60% kiisaska, infekshanka dhegta dhexe ayaa la daweeyaa iskiis, laakiin haddii aan laga daaweyn, waxay noqonkartaa mid aan la dafiri karin. Carruurta qaarkood waxay u nugul yihiin cudurka osteoarthritis, oo loo tixgelin karo 6 jeer in ka yar 6 bilood da’da.
Daaweynta infekshanka dhegta
Ka ilaali dhegta dhexe dhaawaca sheyga
Ka bax dheecaan dhegta dhexe
Isku-dheellitirnaanta cadaadiska hawada ee dhegta dhexe iyo baloogga
Tuubbada Eustachian waa mid gaaban oo badanaa carjawda. Xagasha waa 10 darajo, halka dadka waaweynna ay tahay 45 digrii, oo ka ilaalinaysa dhegta dhexe dheeri ahaan.
Cudurka sanbabada iyo caabuqa dhegta dhexe
Warbaahinta liita waxqabadka liita ayaa ka mid ah waxyaabaha ay tahay in laga fiirsado. Markii loo adeegsado feejignaan farsamo ama shaqo, si loo dhammaystiro hawshan, hawo kasta oo kuxiran gudaha dhegta dhexe waxaa laga nuugo xuubka xuubka waxayna abuurtaa cadaadis taban iyo dheecaan dhegta dhexe waxay la mid tahay caabuq ku dhaca dhegta dhexe oo leh faleebo caabuq. Ma. Lama arki karo infekshan dabadheeraad ah oo ku dhaca qanjidhada iyo adenoids waxay saameyn ku yeelan karaan dhismayaasha ku hareereysan caabuq sababi kara basal ama furmo xayiraad kanaalka, taasoo horseedda xaaladdan inay noqon karto xannibo farsamo-gacmeed ama faragalin balaastar yar iyo shaqo gees ah. Shaqada tuubada xumaanta ayaa si aan toos ahayn loogu faafiyaa marka la soo bandhigo tuubbo hawo hawo leh oo lagu daweynayo xuubka xuubka.
Cudurka dheguhu waa mid ka mid cudurada ugu caansan caruurta iyo carruurnimada. Dhego beelida ay keento caabuqyada dhegaha waxay u horseedi karaan cilado xagga hadalka ah caruurta. Iyada oo ku xidhan aagga dhegta ku lug leh, infekshanka si ka duwan ayaa loo daaweyn karaa Cudurka caabuqa dhegta waxaa loo yaqaanaa magaca sayniska ee otitis. Codku wuxuu gaarayaa dilaaca dhegta bannaanka iyo dhegta dhexe. Carqalad kasta oo ku timaadda gudbinta codka waxay sababi kartaa lumis maqal. Jadwalka soosocda wuxuu soo bandhigayaa noocyada caabuqa dhegaha, astaamahooda iyo sababihiisa iyo daweyntooda:
Cudurka dhegta dhexe
Dhegtu waa unugyada muhiimka ah ee jirka waxay ku lug yeelan karaan cudurada iyo walxaha faafa sida fayraska iyo bakteeriyada. Mid ka mid ah cudurada carruurnimada ugu caansan waa infekshannada dhegaha, gaar ahaan caabuqyada dhegaha. Dhegtu waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo ah dhegta dibedda, dhegta dhexe iyo dhegta gudaha. Cudurka dhegta dhexe waxaa loo yaqaannaa otitis media. Warbaahinta otitis-ka badanaa waxay dhacdaa da’da 6 ilaa 24 bilood. Boqolkiiba afartan boqolkiiba carruurta da’doodu ka yar tahay saddex sano iyo siddeetan boqolkiiba boqolkiiba carruurta ka yar shan sano waxay la kulmaan warbaahinta otitis.
Warbaahinta Otitis media ama caabuqa dhegaha dhexe ayaa ku badan wiilasha.
Waxyaabaha saameeya ciladaha dhegaha
Baruur iyo baruur
Cable Abii Beba Modi Family Cable
Cudurka dhegta ama warbaahinta otitis waxay leeyihiin noocyo kala duwan, kuwaas oo hoos ku taxan:
Kuwani waa qaabab fudud
Daaweyntaan caadiga ah
Cudurka sanka iyo xanuunada dhegaha
Dheecaanka loo yaqaan ‘sinuses’ waa meelaha muruqyada leh ee lafaha qaarkood, oo badanaa ay ka buuxsamaan hawada oo ay ku jiraan xuubka xuubka. Xinjirooyinka ayaa ku jira qaybaha badan ee wajiga, oo ay ku jiraan dhabannada, daanka iyo wejiga. Astaamuhu way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran hadba nooca ay sinjiladu ku lug leeyihiin. Ku lug lahaanshaha sanka hore ee hore ayaa sababa xanuun ku dhaca isha sare. Ku lug lahaanshaha daloolka daanka sanka wuxuu xanuun ku keenaa goobahan.
Xanuunka loo yaqaan ”’usousoidal ” waa mid ka mid ah dambiyada sababi kara dhegaha iyo caabuqa dhegaha haddii ay ku lug leeyihiin. Calaamadaha kale ee cilad-xumada noocaan ah waxaa ka mid ah xanuunka qoorta, xanuunka dhabarka, ama madax xanuun. Qiiqa siggaarku waa mid ka mid ah sababaha sababi kara infekshinka iyo infekshannada dhegaha ee carruurta isla waqti isku mid ah. Daaweynta sinusitiga badanaa waa dawo dhakhtarkuna wuxuu kuu qori doonaa dawada iyadoo loo eegayo marxaladaha cudurka.
Boomaatada iyo caabuqa dhegta
Tonsilku wuxuu ka kooban yahay unugyo jilicsan oo badanaa ku yaal dhamaadka fog ee afka. Barar iyo jeermis ka dhaca aaggan waxay sababi karaan qandho, cuno xanuun, daal, iyo wixii la mid ah. Cudurka dhegaha ayaa ah sababaha ugu badan ee carruurta loogu diro dhakhtar. Dhegaha carruurtu waxay u nugulnaan karaan cudurka sababtoo ah qaab dhismeedka jidhka ee gaarka ah. Mid ka mid ah cudurka ugu halista ugu badan ee cudurka ku dhaca carruurtu waa qunyar-buulka seddexaad.Ku-dillaacista tan saddexaad wuxuu u horseedi karaa infekshinka dhegta.
Doorka cirbadaha saddexaad ee difaaca ayaa ah mid aad muhiim u ah goobtuna waxay ku taal sanka dabadiisa. Tanturiga saddexaad wuxuu ku dhow yahay tuubbada Eustachian. Tuubbada Eustachian waa muuqaalka u dhexeeya afka iyo dhegta dhexe. Dhibaatooyin kasta oo ka soo baxa tuubooyinka Eustachian waxay sababi karaan infekshanka dhegta dhexe. Haddii ay dhacdo barar iyo infekshan ku dhaca qumanka, tuubbada Eustachian waa la xayiray taasina waxay keentaa infekshan ku dhaca dhegta dhexe. Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee caabuqa dhegta dhexe waa dhab ahaan xannibaadda tuubada Eustachian ee cudurka qumanka. Daawooyinka daroogada ayaa ah daaweynta ugu horreysa iyo haddii ay dhacdo infekshan ba’an, qalliin iyo qalliinka qalliinka waxaa ku sameyn kara takhtarkaaga.
Infekshannada dhegaha waxay sababi karaan tinnitus
Sababo kala duwan ayaa sababa buuq. Mid ka mid ah sababaha tinnitus waa jeermis ku dhaca dhegta. Cudurka dhegaha ayaa ah sababaha ugu badan ee carruurta loogu diro dhakhtar. Dadka waaweyni sidoo kale waxay qaadi karaan caabuq dhegaha sababao kala duwan awgood, ooy kujiraan dabaasha biyo wasakhaysan, deegaan wasakhaysan, bakteeriyada iyo fayraska. Buzz waa astaan ​​cudur. Jiritaanka dareeraha ku jira dhegta dhexe waxaa ku xiga tinnitus marka lagu daro maqal la’aanta. Caabuq